Robert Mondavi Private Selection Cabernet Sauvignon 2016 ~ ICT.com.mm
HomeRobert Mondavi Private Selection Cabernet Sauvignon 2016
Robert Mondavi Private Selection Cabernet Sauvignon Alcohol: 13.5% Dry/ 2016 California/ USA Tasting Note Dark red color with medium tone. Aromas of oak, plum, cherry, blackberry layered by earthy spice on the... [Learn more]
Brand: Robert MondaviFilter by: Fine Wine Myanmar, Wine
Dark red color with medium tone. Aromas of oak, plum, cherry, blackberry layered by earthy spice on the nose. Rounded, soft tannins with complex and integrated.
Paired with roasted or grilled lamb or beef, BBQ, hearty stew on game meat (deer or vension). Savory or mature cheeses will beaperfect choice to be paired with as well.
Robert Mondavi အမှတ်တံဆိပ် Private Selection Cabernet Sauvignon 2016 ဝိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ Cabernet Sauvignon ဝိုင်ကို ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရဲ့ အအေးပိုင်းဒေသဖြစ်တဲ့ အလယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသမှာရှိတဲ့ စပျစ်ဝိုင်ခင်းတွေကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတဲ့အနံ့အရသာနဲ့ စပျစ်သီးအမျိုးမျိုးကို ရောစပ်ပေးထားပြီး သင်းပျံ့တဲ့ ဘလက်ဘယ်ရီ၊ ဗင်နီလာ၊ ဝက်သစ်ချနဲ့ ကော်ဖီရနံ့တွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ရင့်မှည့်တဲ့ အနီရောင်နဲ့ အနက်ရောင် အသီးအနှံတွေကိုသာ အသုံးပြုထားပြီး အမေရိကန်နဲ့ ပြင်သစ်ဝက်သစ်ချစည်တွေထဲမှာ သိမ်းဆည်းသိုလှောင်ပြီးမှ ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ Alcohol ပါဝင်မှု 13.5% ရှိတဲ့ Dry/ 2016 ဝိုင်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းငယ်ပြင်းရှတဲ့အရသာရှိပြီး သိုးသား/အမဲသားကင်၊ ဘာဘီကျူး၊ တောကောင်သားချက်၊ ဒိန်ခဲအမျိုးမျိုး စတဲ့ အစားအသောက်တွေနဲ့ တွဲဖက်နိုင်ပါတယ်။
2016 Cabernet Sauvignon – 91 POINTS, Ultimate Wine Challenge 2019
2016 Cabernet Sauvignon – Platinum Medal, Monterey County International Wine Competition 2018